Information for Myanmar about Islam: ဘာသာခြားများ မေးခွန်းအတွက် အဖြေများ (၁)
Posted by A Muslim at 2:41 AM
sskyaw1992 March 18, 2012 at 5:19 AM
Your explanation is useless and meaningless. It is not easy enough to beaBuddha by practicing only by one life. It need to try hard, donate to become the Buddha. U said that if we accept many lives that we pass, it is copied from Hinduism. So how about the Ardan and Ewe story in your religion. It is also the same in Judaism, Christan too. Your religion was formed later than those so can we ask that did ur religion plagiarize from them? Our Buddhism only teach the truth and the Hindusim might also know the truth in that case therefore there is the same theory in that case. Both Buddhism and Hinduism do not accept only one life theory. Before u say that it is copying if the theory from2different religion same in some case, check ur religion first. Judaism, Christan and Islam also have the same theory in some case too and i do not think that one religion copied from other.
Finally, do not discuss like that if u do not know about the other religion. Finally u askaquestion that Is Wi Patarnar given by Buddha or Ashin Taripotta? Even the child in Buddhism know that it was given by Buddhism and we have many evident about them. Check carefully.
အထက်ပါစာသားကို ကြည့်ရတာ ဒီ..ဖြေထားတဲ့ပုဂိုလ်က ဗုဒဟာ မူစလင် God က လွတ်လိုက်တဲ့ တမန်တော်ဆိုပဲ။ ခက် ခက်ရချည်သေးရဲ့ ကိုယ့်ဆရာ။ ဗုဒကို သူလွှတ်လိုက်တာပါဆိုရင် ဗုဒကိုတော့ ဒီလိုမှာတယ်၊ မင်းကောင်တွေ(လူ့ပြည်ကကောင်တွေ)ကိုပြောလိုက်၊ ၅ ပါးသီလမြဲရမယ်၊ သူ့အသက်မသတ်ရ၊ နိဗါယ်ဆိုတာ ရှိတယ် ဒီလိုကျင့်ရင်ရနိုင်တယ်. ဒါတွေ ပြောဖို့လွှတ်လိုက်ပီး နောက် အနှစ် ၁၀၀၀ ကျော်လောက်မှာ နောက်ထပ် တမန်တော် မိုဟာမက်ကို ထပ်လွှတ် ပြီး မင်းတို့လူ့ပြည်ကကောင်တွေကို ပြောလိုက်ကွာတဲ့၊ အရင် ဂေါတမတုံးက ငါညွန်ကြားထားတဲ့ကိစ်စတွေ ပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်။ အခု ဒီလိုလုပ်၊ လည်လှီးသားကိုငါ ကြိုက်တယ်။ အဲလိုလား ဆရာ။ ခင်ဗျားလုပ်တာနဲ့ နဂိုက သူ့ဟာသူ အထိုက်အလျှောက် ဂုဏ်သိင်္ခါရှိအုံးမယ့်
God က ကိုယ့်ဆရာလုပ်လိုက်မှ ဗလောင်းဗလဲ လုပ်တတ်တဲ့ God ဘ၀ အလိုလိုရောက်ရတော့တာပဲ။
နဲနဲပိုကောင်းတဲ့ idea လေးတွေ ထပ်လုပ်ပါအုံး။
ဇီဝက March 18, 2012 at 8:00 AM
သိက္ခာရှိတဲ့ ကွန်မင့် တစ်ခုဖြစ်အောင် အထောက်အထားနဲ့ ပြန်လည် ဆွေးနွေး စေချင်တယ်။ မဟုတ်ပါဘူးကွာ ဆိုတဲ့ အရပ်စကားနဲ့ ပြန်လည် ပြောဆိုတာမျိုးကို စိတ်မ၀င်စားပါ။-
ဆရာဇီဝက ခင်ဗျား၊ ဒီဆိုဒ်က ဗုဒရဲ့ အယူဝါဒကို စောဒကတက်နေတာလား ဗုဒကို မူစလင် God ရဲ့ တမန်တော်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေတာလား ကျနော်သိပ်နားမရှင်းဘူး၊ ဒီ ကျနော့်(အနောနမာစ့်) အပေါ်က အမျိူးသမီးကို ပြန်ဖြေထားတာ ဆရာဇီဝကရဲ့ အိုင်ဒီယာပဲလား။
kozay79 April 10, 2012 at 3:11 PM
တကယ်တော့ သူဖင်ပိတ်ငြင်းနေတာလေ သူကိုးကွယ်ရာဘုရားကိုတောင် သူမသိဘူး
mgmyo min February 10, 2014 at 7:13 AM
အလာလ်‌ကဂရုဏာ အကြင်‌နာအရှင်‌လို့‌ဖော်‌ပြထားတာကိုမယုံပါ မိန်းမများအတွက်‌က‌တော့အလာလ်‌ဟာ monsterပဲ ။မဟာဂရုဏာရှင်‌ကြီးရဲ့ညွှန်‌ကြားချက်‌ က‌တော့‌မိန်းက‌လေး‌တွေကို‌စောက်‌စိအရင်‌ဖြတ်‌ ။ fuckingအတွက်‌24hour stand by readyဆို‌ ‌တော့သူ့ရဲ့ဂရုဏာက24hourလီး ‌တောင်‌‌နေတဲ့ တဏှာရူး ‌တွေအတွက်‌လား။အလာလ်‌ကြီးက fuckingပိုင်း ‌တော်‌‌တော်‌စိတ်‌သန်‌ပုံရတယ်‌။
Nyi Htway July 16, 2014 at 2:25 AM
ဒီပို့စ် ကိုတင်ထားတဲ့သူ သိစေအပ်ပါသည်။
×××(ကိုယ်တော်ဂေါတမက ဘာ တွေကျင့်ပြီး ဉာဏ်စဉ်ရခဲ့သလဲ အရင်အဦး စဉ်းစားပါ။ အခု မြန်မာပြည်က ပြောနေတဲ့ ၀ိပဿနာ ဆိုတာဟာ ကိုယ်တော်ဂေါတမက ပြောတာလား၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ပြောတာလား-၊ ဘယ်သူ့နည်းများ ဖြစ်ပါသလဲ-၊ )××××
သိလိုလျင် မူလရှေးအိန္ဒိယစာပေတွေ ခက်ခက်ခဲခဲလေ့လာရန်မလိုပါ..... ပါဠိစာပေတွေ ရှာနေရန်မလိုပါ..... မြန်မာလိုရှင်းရှင်း ဖွင့်ဆိုပြီးသားတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့လဲ နှစ် ၂၆၀၀ ပြန်သွားပြီးနားထောင်လို့ နာကြားလို့မရနိုင်သလို လက်ဆွဲပြလို့ လဲမရပါ။ သို့သော် ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမသည် အင်္ဂါ ၆ တန်နဲ့ ပြည့်စုံနေတယ်။ မည်သူမဆို အချိန်မရွေး လက်တွေ့ လေ့လာ အစမ်းသပ်ခံနိုင်တဲ့ သတ္တိတော့ ရှိပါတယ်။
ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်က သူဘယ်လိုကျင့်တယ်... ဘယ်လိုဥာဏ်မျက်လုံးပွင့်တယ်(စက္ခုံဥဒပါဒိ၊ ဥာဏဥဒပါဒိ၊ ပညာဥဒပါဒိ ၊ ၀ိဇ္ဇာဥဒပါဒိ၊ အလောကော ဥဒပါဒိ)ဆိုတာ ပြောပြခဲ့တယ်။ ကလေးအိပ်ယာဝင်ပုံပြင်လို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ပြောပြထားတဲ့ ကျမ်းစာလဲမဟုတ်ပါ။ ပရမတ်ဘုရားက ပြဌာန်းပြီး နိယာမများကို ဉာဏ်စဉ် ကိန်းဆိုက်သူက လောက ဓမ္မစာမျက်နှာထဲက ထိုးဖေါက်ဖတ်ယူတာလဲမဟုတ်ပါဘူး။ သူ ဓမ္မကိုဘယ်လို စမြင်တယ်၊ အဆုံးက ဘာလဲ(မင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့် မြင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောထားတယ်) လူတိုင်း အချိန် နေရာ ဒေသ အသားရောင် ဇာတ်နိမ့် ဇာတ်မြင့် မရွေး စမ်းသပ်နိုင်တယ်။
အားလုံးသော ဗုဒ္ဓစာပေ ပိဋကတ်တွေကို ခဏဖယ်ထားလိုက်ပါ။
ဓမ္မစကြာတရားတော်နဲ့ ဆင်တူတဲ့ စာပေတစ်ခုလောက်ရှာပြပါ။ စာပေအရမငြင်းချင်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင် ဘာသာအစွဲ ဘေးဖယ်ထားပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ လေ့လာကြည့်ပါ။
တစ်ခုတော့ ပြောလိုက်ပါရစေ... အသင်စိတ်ဆန္ဒမရှိက မလေ့လာဘဲနေနိုင်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓကတော့ သူ့ဝါဒကိုမလိုက်နာရင် သတ်ပစ်ပြီး နာမတော်ရှေ့မှာသန့်စင်ခြင်းပြုပါလို့ မဆုံးမခဲ့တာတော့ သေချာပါသည်။